Wasiir qiray inay jiraan maxaabiis la xukumay oo guryahooda loo diro - Caasimada Online
Home Warar Wasiir qiray inay jiraan maxaabiis la xukumay oo guryahooda loo diro
Wasiir qiray inay jiraan maxaabiis la xukumay oo guryahooda loo diro
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Wasaaradda Cadaalada Xukuumadda Soomaaliya Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji, oo u waramaayay warbaahinta maxaliga ah ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan dhibaatooyin badan oo ka taagan Maxkamadaha iyo Xabsiyada ku yaalla dalka.
Wasiirka waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn xiligaani ay tahay in Maxaabiista qaar aysan heysan goobo lagu xiro xukunka marka uu ku dhaco kadib.
Waxa uu sheegay Wasiirka in iminka ay jiraan Maxaabiis badan oo uu ku dhacay Xukuno kala duwan, hase ahaatee loo diro guryahooda, sababo la xiriira qolol la’aan ka dhex jirta Xabsiga.
Wasiirka Wasaaradda Cadaalada, oo ay xiganeysay Idaacada dalsan ee magaalada Muqdisho, ayaa yiri ‘’Waxaa jira dhibaatooyin badan oo naga heysta dhanka Xabsiyada, waxaan marqaati ka ahay oo aan arkay inay jiraan Maxaabiis xukuman oo loo diray guryahooda maadaama aanu jirin goob lagu xiro’’
Wasiirku waxa uu sheegay in waxyaabaha uu arkay waqtiagan ay qeyb ka tahay in dadka markii la xukumo la waayo Xabsi lagu xiro taasina ay keeneyso in guryahooda loo diro sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu intaa ku daray Wasiirka in arrintaasi ay tahay mid murugo leh, isla markaana u baahan in wax laga qabto, isagoo Madaxda ugu sareysa dalka ku wargaliyay inay muhiim tahay in la dhiso Xabsiyo.
‘’Madaxda dalka ugu sareyso waan gaarsiineynaa horayna waan u gaarsiinay, waxaan dooneynaa in maxaabiista Xukuman laga jaasiyo falka ay geysteen, waxa ayna taasi imaankartaa in lahelo Xabsiyo faaruq ah’’
Si kastaba ha ahaatee, Wasiirka Cadaalada Soomaaliya Abuukaate Xasan Xuseen xaaji, ayaa ku baaqay in ahmiyad gaara lasiiyo waxyaabaha ku xeeran Xabsiyada oo uu sheegay inay aasaas u tahay Cadaalada.